Olee otú iji bulie ogo site n'ịme nyocha ọchụchọ weebụ na mpaghara gị?
Ka anyị malite site n'ịchọta ihe nyochaa weebụ nyocha kachasị anya na-anọchi anya (ma ọ bụ mpaghara SEO). Achọpụta Nchọpụta Nchọpụta mara maka arụmọrụ kachasị maka ozi ọ bụla e bipụtara na ibe weebụ gị, iji mee ka ha mara mma karịa ebe ndị Google na-enyocha crawlers maka nhụzi dị mma na ntanetị nke SERPs. Ịtụle njikarịcha ịchọpụta weebụ na mpaghara mpaghara, ọ na-anọchite anya usoro nke ịmepụta azụmahịa gị n'Ịntanet site na nsonaazụ mbụ maka arịrịọ ọchụchọ mpaghara.Ọtụtụ mgbe, a na-enye mgbalị nyochaa ọchụchọ nyocha weebụ dị ka ịrụ ọrụ na ederede ntuziaka na ahịa azụmahịa dị iche iche iji nweta ọganihu ntanetị n'ịntanetị maka azụmahịa gị. N'okpuru ebe a, m ga-atụle mkpirikpi nyocha maka ebe ọ bụla ị na-arụ ọrụ ịchọta nyocha ọchụchọ weebụ na ọkwa mpaghara.
Otu n'ime okwu ndị kachasị mkpa bụ Google My Business Page na nyocha ọchụchọ weebụ ọ chọrọ.G in i mere o ji buru uz o buru ibu? Naanị n'ihi na a kwenyere na ọ bụ mpaghara nke ọnụnọ gị n'ịntanetị, nke nwere ohere kachasị njọ ka egosiputa ya kpọmkwem n'etiti nyocha mbụ ịchọrọ maka azụmahịa ala.O kwesiri ime na ịtụtụbeghị Google My Business Page, chọta ya ma ọ bụ malite mejupụta gị nke dị ugbu a. Nke a bụ ndepụta nke ihe ndị ị na-atụ aro iji kpuchie ụdị nchịkọta weebụ gị kachasị mma: kọwaa aha azụmahịa gị, nchịkọta nkọwa ya na oge ọrụ na nọmba ekwentị, njikọ njikọ gị ọdịda, na ụfọdụ foto kwadoro maka ọrụ azụmahịa gị. Ime otú ahụ, ị ​​nwekwara ike iji Google Posts, sonyere Google Plus na ụfọdụ ndị obodo nke oge a. Echefukwala ịgba ndị ọrụ ndị ọzọ ume ịhapụ ụfọdụ nyocha na ebe nrụọrụ weebụ gị, mgbe ị na-etinye ihe ọhụrụ na imelite ihe odide dị na oge.
Na-esote, jide n'aka na mgbasa ozi nyochaa weebụ gị na-aga ịkụ nzọ dị mma na akwukwọ ntụziaka. M na-atụ aro ka ị nyochaa site na ịhọrọ otu n'ime ihe ndị na-emeghe ntinye oghere. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịhụ otú nke ọma na ebe ndekọ ndekọ azụmahịa na-egosi na ebe nrụọrụ weebụ gị gosipụtara. Imirikiti ndepụta ndị a chọrọ otu nzọụkwụ na omume ndị ahụ, dị ka ndị ahụ anyị tinyeworị na Google My Business Page. Enwere m ike ịnweta ego elekere abụọ n'ihi na ụlọ ọrụ ọchụchọ na-ahọrọ igosi naanị nsonaazụ ziri ezi, n'ihi ya, ị ga-ekpochapụ ihe ọ bụla na-ezighi ezi ma ọ bụ na-ezighi ezi data gbasara azụmahịa gị. Ọ dịghị mkpa ịkọcha oge na mgbalị gị, dịka ị na-arụ ọrụ ndị a dị ka ọ ga-enye gị mmetụta dị nso na nso nso na nchịkọta ọchụchọ weebụ gị, nke a na-enye gị nkwado ngwa ngwa na ogo gị.
N'ikpeazụ, ana m enye ndụmọdụ ka a tụlere profaịlụ mmekọrịta. Cheta, ha nwere ihe dị mkpa, karịsịa banyere njikarịcha nchọgharị weebụ gị. Akwụsịla ịmepụta ndetu na ụfọdụ profaịlụ mmekọrịta dị ka Facebook ma ọ bụ Twitter, na-atụle ndekọ aha na isi na njikọ ndị na-eduga na ebe nrụọrụ weebụ gị.Ime nke a, jide n'aka na ị ga-anọgide na-eme ihe maka ọrụ ị na-ezipụ, na-akwụ ụgwọ zuru ezu maka ọdịnaya ọdịnaya. Nyochaa oke nhọrọ nke ahịa mmadụ, dịka Google na ndị ọzọ na-ahụ maka ya, mbọ gị na-eme ebe a ga-enwe mmetụ ahụ dị mma na nyocha ọchụchọ weebụ gị zuru ezu Source .